घर » उत्पादन » तरल निस्पंदन » फिल्टर कार्ट्रिज
विवरण ：LPPF फिल्टर कार्ट्रिजेस बहुपरत polypropylene को निर्माण, उच्च प्रवाह दर, व्यापक रासायनिक अनुकूलता र उच्च फोहोर होल्डिंग क्षमता को विशेषता बाट निर्माण गरीएको छ। यी फिल्टरहरू खोपहरू फिल्टरि partको कण र कोलोइडल दूषित पदार्थहरू हटाउनका लागि उपयुक्त छन्।
विवरण ：एलएफसी फिल्टर कारतूसहरू सक्रिय कार्बन फाइबर र पॉलीप्रोपाईलिन घटकहरूबाट निर्मित हुन्छन्, डिकोलोराइजेशन, डिओडोरिजेसन र अनावश्यक सोखनाको लागि विकसित, विशेष गरी बोतलको पानी उद्योगमा जैविक अशुद्धता र जैविक अशुद्धता हटाउनका लागि। तिनीहरूले कम प्रेशर ड्रपमा उच्च प्रवाह दरहरू प्रदान गर्न सक्दछन्, गैर-विषाक्त पदार्थ रिलीजिंग र प्रयोगको लागि सुविधा। थप रूपमा, तिनीहरू धान्य सक्रिय कार्बन कार्ट्रिजको आर्थिक विकल्प हुन्।
विवरण ：सबै फ्लोरोपालिमर फिल्टर कार्ट्रिजहरू हाइड्रोफिलिक PTFE झिल्ली र PVDF कम्पोनेन्टहरू द्वारा निर्मित छन्, उच्च थ्रुपुटहरू, उच्च प्रवाह दरहरू र लामो सेवा जीवन प्रदान गर्दै। उत्कृष्ट रासायनिक अनुकूलता र अक्सीकरण प्रतिरोधको तिनीहरूको विशेषताहरूको कारण, ती बोतलको पानी उद्योगमा ऑक्सीकरणयुक्त पानी फिल्टरेशन अनुप्रयोगको लागि उपयुक्त छन्।
विवरण ：LPTA फिल्टर कारतूसहरू स्थायी रूपमा हाइड्रोफोबिक PTFE झिल्ली द्वारा चित्रित छन्, विशेष गरी खोप विनिर्माणमा बाँझ venting र ग्यास अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको। तिनीहरू अखण्डता परीक्षण योग्य छन्, उच्च प्रक्रिया सुरक्षा, उच्च थ्रुपुटहरू, चरम आर्द्रता र कडा इन-लाइन स्टीम बाँझ नसकिने प्रस्तावहरू प्रदान गर्दै। यी फिल्टरहरू लामो सेवा जीवनको लागि बारम्बार स्टीम-बाँझ हुन सक्छन्।
झिल्ली PVDF फिल्टर कारतूस
विवरण ：LPSL फिल्टर कारतूस विशेष गरी प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन फिल्टरेशन फिल्टेरेशनका लागि डिजाइन गरिएको हो। उनीहरूले अत्यधिक कम एक्स्ट्रैटेबल्स प्रस्तुत गर्दैछ १०mg / १० भन्दा बढि बिना "SIP को 10० चक्रको साथ लामो सेवा जीवन। यी फिल्टरहरूले शक्तिशाली उत्पादनको अन्तिम गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
झिल्ली MCE फिल्टर कारतूस
विवरण ：LPM फिल्टर कारतूसहरू उच्च प्रदर्शन, हाइड्रोफिलिक मिश्रित सेल्युलोज एस्टर झिल्लीले उच्च प्रवाह दरहरू, कम प्रोटीन सोखना र उच्च माइक्रोबायोलोजिकल सुरक्षा प्रस्ताव गर्दछ। यी फिल्टरहरू लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको छ र विशेष गरी खोपहरूको प्रिफिल्टरेसनको लागि उपयुक्त छ।
झिल्ली नायलॉन फिल्टर कारतूस
विवरण ：पूर्ण दक्षताका लागि पूर्ण-वेल्डेड निर्माण र बाइपास-बाट निस्पंदन फिल्टर
Sffiltech फिल्टर बैग सील रिंगको साथ पूर्ण वेल्डेड निर्माणले १००% बाईपास-मुक्त निस्पंदन प्रदान गर्दछ
दबाव-सक्रिय Sffiltech फिल्टर मोहर रिंग एक लचिलो, रासायनिक प्रतिरोधी मुहर प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि झोला फिल्टर आवास मा अनुकूलन
सामग्री सिलिकॉन र क्रेटर-बनाउने पदार्थहरूबाट स्वतन्त्र छ
विशेष गर्मी सेट र पोलिश सतह उपचार उल्लेखनीय फाइबर रिलिज कम गर्दछ
स्थिर र लचिलो वेल्डेड सीमहरू जसले पुन: संयोजक टोकरीमा अनुकूल छ
झिल्ली पेस फिल्टर कारतूस
कार्ट्रिज आवास फिल्टरेशन
विवरण ：कागजात फ़िल्टर मल्टि कार्ट्रिज उच्च प्रवाह फिल्टर हाउसिंग दायरा rid कार्ट्रिजदेखि १०० कारतूससम्म, र कार्ट्रिजको लम्बाई २० "，०" ，० "，०" हो। कार्ट्रिज फिल्टर हाउसिंगको एक किसिम उपलब्ध छ, वसन्त ढक्कन सहायकसँग अद्वितीय स्विंग बोल्ट अपनाउँदै।
कार्ट्रिज फिल्टर हाउजि both दुबै खुला समाप्त कारतूस र एकल खुला अन्त २२२ कारतूसको साथ स्थापना गर्न उपयुक्त छ। अद्वितीय हुपिंग र द्रुत खोल्ने डिजाइन। खोल्न, बन्द गर्न, हेरफेर गर्न र मर्मत गर्न यो सजिलो छ
मेल्टब्लाउन फिल्टर कारतूस
विवरण ：१. तीन तह संरचना संरचना कार्ट्रिजले उच्च फोहोर होल्डिंग क्षमता, लामो सेवा जीवन प्रदान गर्दछ
२. कुनै पनि बाइन्डरहरू र Adhesives को उपयोग नगरी थर्मल बॉन्ड द्वारा फोर्म गरिएको।
3.100.१०% शुद्ध पोलीप्रोपाइलिनले पानीमा कुनै प्रदूषण निम्त्याउँदैन
Wide. व्यापक रासायनिक अनुकूलता
फिल्टर प्रक्रिया फिल्टरिration विस्तार गर्न G.समूह डिजाइन
A. सबै प्रकारका एडेप्टरहरू उपलब्ध छन्।
स्टेनलेस स्टील कारतूस फिल्टर कार्ट्रिज
घर पछिल्लो 1 अर्को अन्तिम - कुल 11 1 प्रति पृष्ठ रेकर्ड वर्तमान पृष्ठ / कुल 1 20